News Bites | Scrolla Izindaba
Umndeni kaMyeni ucela uhulumeni wakuleli ukuthi ufake ingcindezi eMelika mayelana nokubulawa kwabantu
Umndeni kaLindani Myeni ucele uhulumeni waseNingizimu Afrika ukuthi ufake ingcindezi kuhulumeni waseMelika mayelana nokubulawa kwakhe ngamaphoyisa e-Hawaii ngasekuqaleni kwenyanga.
Ukuzulelwa ingqondo kukaTokyo kuchaziwe
Scrolla Africa - 24th Apr 2021 0
UJulius Malema usho kahle ngesikhathi ethi: Ngiyamthanda #uTokyoSexwale futhi ngiyafuna ukumeseka. Mara hai (Cha angivumi).
Kuthungathwa umkhumbi odukile e-Indonesia
Scrolla Africa - 23rd Apr 2021 0
Izwe lase-Indonesia liphelelwa yisikhathi sokuthola nokutakula amalungu angama-53 emkhumbini ohamba ngaphansi kolwandle, onyamalale ezintatha ngoLwesithathu ekuseni.
I-TS Records ayizigcinanga izithembiso zayo emndenini kaPro Kid
Ngesikhathi kungcwatshwa uPro Kid eminyakeni emine eyedlule, i-TS Records yazibophezela ekuqinisekiseni ukuthi umndeni walo mrepha awulambi. Lokhu kushiwo yilungu lomndeni kaPro Kid, ogama lakhe langempela kwakungu / nguLinda Mkhize.
Indela inqume ikhanda layo ukujabulisa uBuddha
Scrolla Africa - 22nd Apr 2021 0
Indela yase-Thailand isebenzise umshini wokusika amakhanda ukuzinquma ikhanda lakhe njengomnikelo kuBuddha, ngenkolelo yokuthi uzophinde azalwe "njengomuntu ophakeme ngokomoya".
Kuphele iminyaka eyi-15 engalubhadi emsebenzini ebe ehola ophelele
Umsebenzi wasesibhedlela sase-Italy uphenywa ngamaphoyisa ngokungafiki emsebenzini iminyaka eyi-15 ekubeni ethola umholo wakhe ophelele.
UDerek Chauvin utholakale enecala lokubulala uGeorge Floyd
Lowo owayeyiphoyisa, uDerek Chauvin utholakale enecala. Utholakale enecala lokubulala ngenhloso, icala lokubulala umuntu ngenhloso ngokucabangeli impilo, kanye necala lokubulala umuntu budedengu.
“Angisona isigqila samuntu” kusho uBonang
Scrolla Africa - 20th Apr 2021 0
Ukube uBonang Matheba ubekwazi ukuzenzela, uhlelo lwakhe lwempilo i-Being Bonang belungeke lusasakazwa ngokuzayo.
Abenzi bamafilimu bendawo babuyisela i-Limpopo ezikhathini zamabhayisikobho
Scrolla Africa - 19th Apr 2021 0
I-Bioscope Yarena iveza abenzi bamafilimu abazinze e-Limpopo, kanti iphula namarekhodi ezinkundleni zokuxhumana.
Abaculi asebekhulile bashisa izikhotha kuhlobo lomculo lwe-rap
Bakhule ngokwanele ukuba ngomkhulu kubazukulu, kodwa bashukumisa inkundla emculweni we-rap waseBrithani.